Fouette - yigama elivamile ukunyakaza lemifisha umdanso we-classic. It is ibulawa njengesigebengu uchungechunge imizuliswano okuphindaphindiwe nge Tempo okusheshayo. Ngaphansi kwalezi ezisebenza umlenze ukunyakaza ngemuva ngamunye ematfuba 360 okumvulela ohlangothini.
Fouette - kusho "kuphazamise kuze, ngezifiso, isiswebhu" lihunyushwa lisuselwa French. Lapho besebenza umlenze entshonalanga inqubo ukubulawa ifinyelela degrees 45 nangaphezulu. Ukusebenza, okungokwendlela classical ifa fuete, ngokuvamile esinye sezenzakalo ezivelele, ephawula ballerina ku Pointe. Esikhathini ballet "Swan Lake", "Don Quixote", "Paquita" futhi "Le Corsaire" umlingiswa oyinhloko wenza izibalo 32 elandelanayo kuchazwe.
Ngokwe amagama dance classical ukuzungeza lolu hlobo kufanele ngokuthi Tours fouettés. A ngaphandle ezingavamile kwaba ballet "La Bayadere". Kukhona umdansi, enza indima Gamzatti`s wenza 20 kuchazwe izinyathelo futhi uchungechunge "Italian" fuete. Lokhu ukuhamba enkundleni njalo ababulawa zu dehors, kodwa kungenzeka futhi isiqondiso zu dedans. Njengoba inguqulo waseshashalazini futhi ingasetshenziswa interleaving izindlela ezichazwe ngenhla. izibalo Sihlala sodwa kunoma iluphi uhlangothi ingasetshenziswa ushintsho zibhekise ehlukahlukene. Zisetshenziswa inhlanganisela ahlukahlukene, njengoba axhunyiwe nabanye ukunyakaza ezakha umdanso we-classic. I amagama ballet, kukhona amaqembu iminyakazo ngegama elithi "fuete" esihlokweni. Sikhuluma zonke izinhlobo ematfuba.
Cacisa inshokutsi "fuete" kule umthombo. Ngokusho ulwazi oluqukethwe, sikhuluma sibalo dance classical, esakhiwa ukuvula iminwe emlenzeni wokuqala futhi kanyekanye motion isiyingi emoyeni yesibili. Ukuze leli qembu pa libhekene wangiklwebha umzimba ukusiza ukujikeleza umdansi. Futhi sibonga lesi sibalo, kukhona ushintsho isiqondiso.
Ngokwe- "Dictionary of Umqondofana" Trishina VN, okulingana linencazelo ethemini oyithandayo umusa welithi "Ukujikeleza". Le ncwadi yesayensi Efrayimi icacise ukuthi fuete - iqembu pa dance classical. It libhekene ukunyakaza abukhali unyawo. "Small Collegiate Dictionary" kwenza kucace ukuthi sikhuluma sibalo dance zesifazane. Igama libhekisela ngokuvamile umkhaya. Ake unake kweminye imithombo. definition Okufanayo atholakala isichazamazwi imigomo angaphandle isiRashiya, Kuznetsov futhi Ozhegova.
Ivan Melezh: Life futhi Umsebenzi
Yini izakhiwo ewusizo mountain ash okusetshenziselwa izinjongo kwezokwelapha?